မောင်မင်းဇော်: software နှင့် တစ်ခြား ရှာချင်တာများကို ဘယ်လို ခဏလေးနဲ့ ရှာရမလဲ
(၂) "your uninstalle .mgminzaw.blogspot.com" လို့ google ကနေ ရိုက်ပြီး Google search ကို နှိပ်လိုက်ပါ.
သတိထားစေချင်တာက "your uninstaller .mgminzaw.blogspot.com" ဆိုတဲ့နေရာမှာ your uninstaller နှင့် .mgminzaw.blogspot.com ဆိုတဲ့ ကြားထဲမှာ space bar လေး တစ်ချက် ခြားစေချင်ပါတယ် . အဲ့လို ရိုက်ပြီးသာ ရှာကြည့်ပါ . ကျွန်တော့် ၀ဘ်ဆိုက်မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားဆိုက်တွေလဲ ရှာကြည့်လို့ရပါတယ် . ရှေ့က စာလုံးနေရာက မိမိရှာချင်တဲ့ software နာမည် ပြီးတော့ space bar ပြီးတော့ မိမိရှာချင်တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်နာမည် အဲ့လို ရှာကြည့်လိုက်ပါ . ဒါက အလွယ်ဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံး ရှာနည်းပါ. အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
ရေးသားသူ flower lay at 06:19